परामर्श - Samata Khabar
मनोसामाजिक समस्या भएकालाई क्षमता विकास तालिम
काभ्रे : काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा मनो सामाजिक समस्या भएकाहरुलाइ लक्षित गरी आयोजना गरिएको क्षमता विकास तालिम सम्पन्न भएको छ । कोशिश राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वाबलम्बन संगठनको आयोजनामा, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा र पनौती नगरपालिकाको सहकार्यमा क्षमता विकास तालिम सम्पन्न भएको हो । मनो सामाजिक समस्या भएका व्यक्तिले पनि समाजमा उल्लेखनीय कार्यहरु गर्न सक्छन् भन्ने आभाष […]
मौसम परिवर्तनसँगै रुघाखोकी लाग्ने समस्या धेरैलाई हुने गर्छ । रुघाखोकी लागेको बेला प्रशस्त तातो झोलिलो चिज खाने, तातो पानी पिउने लगायतका उपाय अपनाउन चिकित्सकहरू सुझाउँछन् । रुघाखोकी लागेको बेला विशेषगरी खानेकुरामै ध्यान दिए औषधि प्रयोग गर्नु नपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । यदि रुघाखोकी लागेको बेला ती खानेकुरा खाएमा झन गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ । केके […]
नियमित यौन सम्पर्क गर्नुका फाइदा !
काठमाडौं : हाम्रो देशमा यौन सम्बन्धी कुरा गर्न लाज मानिन्छ तर, खास कुरा यो हो कि नियमित सेक्स राम्रो स्वास्थ्यको साँचो हो। सेक्सबाट ब्लडप्रेशर कम हुन्छ र कोलस्ट्रोलमा पनि सुधार आउँछ। एक सर्वेका अनुसार नियमित यौनसम्पर्कबाट मुटुरोगको सम्भावना पनि कम रहन्छ भने राम्रोसँग गरिने यौनसम्पर्कले मानसिक तनाव पनि काम हुन्छ । जो व्यक्ति नियमित यौनसम्पर्क गर्छ उसको […]
यस्ता छन् मुटु बचाउने सात तरिका
१. कम्तिमा सात घन्टा सुतौँहरेक रात कम्तिमा सात घन्टा सुतौँ। कडा परिश्रम छ भने आठ घन्टा सुत्न सकिन्छ। निद्रा बिग्रिएमा शरीर चल्ने प्रक्रियामा गडबड हुन्छ र मधुमेहले सताउने सम्भावना बढ्छ। निद्रा नपुग्दा धमनीमा क्याल्सियम जम्मा हुने खतरा रहन्छ, जसले धमनी खुम्चिन सक्छ। २. आफ्नो रक्तचाप जानी राखौँरक्तचापको जानकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। उच्च रक्तचापले धमनीलाई कमजोर […]
महिनावरी गडबडी हुँदा यस्तो छ घरेलु उपचार ?
एजेन्सी : समान्यत महिनावरी चक्र निश्चित अवधिमा हुने गर्छ । कसैलाई २८ दिनमा त कसैलाई ३२ दिन । यस अवधि भित्र नियमित रुपमा महिनावरी भएमा त्यसलाई सामान्य मानिन्छ । तर, सबैको हकमा यस्तो हुँदैन । कतिपयको महिनावरी चाडै हुने वा ढिलो हुने भइरहन्छ । यस किसिमको अनियमित महिनवरीको एकमात्र कारण छैन । यसमा शारीरिक वा मानसिक […]